Musharaxiinta iyo Xildhibaano badan oo kulan xasaasi ah uga socda Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xildhibaano farabadan oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa haatan waxaa uu kulan deg deg ah uga socdaa Hotelka Jasiira ee Magaalada Muqdisho.
Kulanka oo ah mid Albaabada u xiran yihiin ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, doorashada dhaceysa iyo marxalada kala guurka ah ee la galay, kadib markii uu dhammaaday muddo xileedka Madaxweye Farmaajo.
Warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa sheegaya in kulan sigaar ah diirada loogu saarayo kulanka barri ay yeelanayaan Xildhibaanada Baarlamaanka, isla markaana uu hortegayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa berrito Xildhibaanada ka hor jeedin doona khudbad uu uga hadli doono waxqabadka 100-kii maalmood ee Xukuumadda iyo Warbixin kale oo ku aadan xaaladda dalka.
Markii uu soo dhammaado kulanka u socda Musharaxiinta iyo Xildhibaanada ayaa waxaa la filayaa in Warbaahinta la hadlaan Xildhibaano, iyagoona faah faahin dheeraad ah ka bixin doona kulanka iyo arrimo kale.